Ukwenziwa Kwemininingwane: Ukufinyelela Eminyakeni Eyinkulungwane Ngendlela Eqhutshwa Ngedatha | Martech Zone
Ukwenziwa Kwemininingwane: Ukufinyelela Eminyakeni Eyinkulungwane Ngendlela Eqhutshwa Ngedatha
NgoMsombuluko, Novemba 28, 2016 UJohn Manganaro
Ngokombiko othile ucwaningo lwamuva olwenziwe nguZillow, izinkulungwane zeminyaka zichitha isikhathi esiningi zicwaninga, zithenga izinketho ezingcono kakhulu futhi ziqhathanisa amanani ngaphambi kokuthenga. Futhi ngenkathi le nkathi entsha yomthengi onolwazi olunzulu imele ushintsho olukhulu lwemikhiqizo nezinkampani, ibuye inikeze nethuba legolide. Ngenkathi abathengisi abaningi begudluze inhlanganisela yabo yezokumaketha ukuze bagxile emisebenzini edijithali, kubalulekile ngokulinganayo ukusizakala ngomcebo ofanayo wedatha osetshenziswa yizinkulungwane zeminyaka yanamuhla.
Ukusetshenziswa kwentuthuko yakamuva ocwaningweni nakubuchwepheshe bedatha akudingeki kukhawulelwe ohlangothini lwabathengi. Izinkampani zingalwa nemininingwane enedatha ukuze ziqonde kangcono izithameli zazo. Ngokwazi ukuthi izinkulungwane zeminyaka ziqhubeka kanjani nenqubo yocwaningo, nokuthi yiziphi izinhlobo zolwazi abazisebenzisayo, abathengisi bangazivumelanisa ngokufanele ukuze bakhange kulokhu kubaluleka kwabantu.
Cabanga ngalokho okwenza isiza esinjenge-Amazon siphoqelele - sazi umthengi futhi singenza izincomo zokuthenga ezenzelwe lowo msebenzisi. Futhi asikho isizathu sokuthi ibhizinisi lakho alikwazi ukungena kulolu hlobo lwedatha analytics, noma ngabe wenza umsebenzi wezitini nodaka.
Isibonelo, senze i-algorithm enezinguquko ezibalelwa ku-1,000 XNUMX ezisiza abathengisi bezimoto ukuthi baqonde izinhlobo zezimoto abathengi babo abangazithenga kakhulu. Lokhu kubheka izinto ezinjengokuziphatha kokuthenga kwangaphambilini, izinhlobo ezithandwa kulowo makethe wezwe, ukuhlaziywa kokuncintisana nokunye okuningi. Ngaleyo ndlela, ngemuva kocwaningo lweminyaka eyinkulungwane ngohlobo lwemoto alufunayo, siqinisekisa ukuthi le moto isesilinganisweni somthengisi ukuze bakulungele ukuthengisa lapho kufika iminyaka eyinkulungwane.
Iminyaka Eyinkulungwane ayihambeli inkatho yemoto ukuze iphequlule ngokungenhloso; benza leyo ngxenye online. Bachitha 17 amahora ukuthenga ku-inthanethi kwemoto ngaphambi kokuthenga. Esikhathini sanamuhla, kungumsebenzi womthengisi ukuqinisekisa ukuthi inkatho yenzelwe ukuthanda izinto zeminyaka eyinkulungwane. Iminyaka Eyinkulungwane ihlome ngemininingwane; Udinga ukuhloma ngedatha eningi (uma kungenjalo ngaphezulu!) ukuze ubalungele. Enye indlela elula yokwenza lokhu ngokubheka idatha yokuthengisa engokomlando, nokuthi wenza bani ukuthengisa. Ingabe uguqula abathengi beminyaka eyinkulungwane? Uma kunjalo, imiphi imikhiqizo noma izinsizakalo abazithathayo? Ngokusebenzisa lolu lwazi, ungaklama uhlu lwakho olufanele futhi wandise ukuthengiswa kwesikhathi esizayo.
Amaphesenti angama-81 aneminyaka engu-18-34 ubudala afuna imibono kwabanye ngaphambi kokuthenga, ngokusho kuka ucwaningo oluvela kuMintel. Futhi ngenkathi umnikazi webhizinisi engahle acabangele umcabango wamazwana abhekene nomphakathi, ukubuyekezwa okuku-inthanethi kunikeza ithuba lokuthola impendulo engacwengekile, ethembekile mayelana nokuthi amakhasimende akho acabangani ngokuhlangenwe nakho kwawo. Imayini ukubuyekezwa kumasayithi afana ne-Yelp, i-Edmunds, i-TripAdvisor, i-Cars.com, uhla luka-Angie (noma yini enengqondo embonini yakho) futhi usebenze nethimba lakho ukuxazulula noma yiziphi izindawo ezikhathazayo.
Kepha ungagxili kuphela ekubuyekezweni okungalungile. Ukubuyekezwa okuhle empeleni kungafundisa kakhulu, ngoba bachaza umbono womkhiqizo nedumela lakho. Ingabe waziwa ngokusebenza kahle kwamakhasimende? Ngezaphulelo ezinhle? Ngokukhetha okubanzi? Lapho sisebenza nabathengisi bezimoto, sikhomba ukuthi yini amandla abo, bese sisebenza nabo ukuklama ukumaketha kwabo namabhizinisi ngokufanele. Isibonelo, uma amakhasimende ethanda amanani awo, angahle angafuni ukukhangisa ngaleyo BMZ.
Hlola Isipiliyoni Seselula
Ukuthola nje iminyaka eyinkulungwane esitolo sakho akusenele, ngoba isipiliyoni seselula manje sidlala indima ngokuziphatha kokuthenga ngaphakathi esitolo. Amaphesenti ama-57 weminyaka eyizinkulungwane sebenzisa izingcingo zabo ukuqhathanisa amanani ngenkathi usesitolo. Uma unento ethinta iso lakhe, futhi umthengisi osizayo ophendula imibuzo yakhe, usengalahlekelwa ukuthengisa uma ikhasimende uGoogles ozoncintisana naye phansi komgwaqo bese ethola inani eliphansi. Bafunda nemininingwane yekhwalithi - ngokwesibonelo, uma umthengisi wezimoto eqhubeka nokuthi imoto ithembeke kangakanani, kodwa-ke ikhasimende lifunda konke lokhu kubuyekezwa mayelana nokuwohloka kwemoto, bazoba nemibuzo.
Izindaba ezimnandi lapha ukuthi ulwazi lweselula lungasebenza njengefomu ledatha leqembu lakho. Yenza okuhlangenwe nakho kokuthenga okuhlekisayo bese ucabanga ngezinto umuntu angahle azibheke efonini yakhe. Izinto ezithile esitolo sakho, izimbangi zendawo, izibuyekezo, njll. Ungafunda ukuthi umuntu oncintisana naye ubonisa izikhangiso zezaphulelo njalo lapho umuntu efuna umkhiqizo wakho odumile. Noma mhlawumbe iwebhusayithi yakho ayiveli lapho othile efuna lowo mkhiqizo, okukhombisa ukuthi ungaba nomsebenzi othile we-SEO okufanele uwenze.
Kepha lokhu akuyona nje umdlalo wokuzivikela - futhi kungaveza amathuba. Isibonelo, sisize ozakwethu bomthengisi ukuthi babone izimo lapho izimbangi zabo zingenzi umsebenzi omkhulu wokukhangisa ukwakheka noma imodeli ethile. Lokhu kukhuthaza abathengisi bethu ukuthi babeke leyo modeli, mhlawumbe ngentengo noma ikhwalithi engcono, bese kudala imali engenayo ethe xaxa.
Idatha ikuyo yonke indawo. Yisebenzise.
Ukuguqulwa kwedijithali akukona nje ukuqala ikhasi le-Facebook noma ukusebenzisa ezinye izikhangiso zokucinga. Izibonelo ezingenhla zimelela izindlela ezimbalwa ongangena kuzo kulwazi oluku-inthanethi, kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi, ukuze uqonde kangcono ikhasimende lakho. Ngokubheka iWebhu ngamehlo amakhasimende akho, uzothola umuzwa wakho konke abakubonayo ngenkathi kuthengwa, kukuvumela ukuthi uzivumelanise ngokufanele ukuze uzuze ibhizinisi labo.
Tags: inkatho yemotoizimotoidatha eqhutshwayoukuguqulwa kwedijithalii-goldenman sachsKweminyakaIzinkulungwane zeminyakai-mintelisipiliyoni seselulaukubuyekezwa okungalungileukuziphatha kokuthengaIzibuyekezozillow
UJohn Manganaro uyi-VP yoMkhiqizo nezibalo ze- UKUSHAYELA, lapho enesibopho semikhiqizo emisha kanye ne-analytics yedatha, egxile ekusizeni abathengisi ukuphatha iqoqo labo lezimoto ezisetshenzisiwe kahle. Phambilini, uManganaro wayeyi-Management Consultant ye-PwC futhi engumnikazi womkhiqizo wezinhlangano zobuchwepheshe, kufaka neCars.com.
Ngaphandle Kokuthi Imakethe Yabakhangisi, Ukumaketha Kungumsebenzi Onzima